Arimo Jacelka Ragga Dila Balse Ay Haweenka Ogeyn , Mashquulka Badan Iyo Ti Gillin La`aanta Ayaa Qeyb Ka Ah - iftineducation.com
Arimo Jacelka Ragga Dila Balse Ay Haweenka Ogeyn , Mashquulka Badan Iyo Ti Gillin La`aanta Ayaa Qeyb Ka Ah
aadan21 / August 29, 2016
iftineducation.com – Waxaa jira arimo badan oo dili kara jaceylka ninka hadaba waxa gabaryaheey ku siineeysaa dhowr arin oo ay muhiim tahay in aad iska ilaaliso si jaceylka uusan u dhiman.
1- Jees jeesidda Iyo Dhaawacidda Dareenka: jees jeesidda waa arin aad u xun oo dhalineysa naceyb , waxa ayna daaqadda ka saareysaa ixtiraamka halka booskaas uu soo galayo dood iyo is qab qabsi , waxa ayna ugu dambeyn keeneysaa in jaceylka uu bur buro.
2- Mashquulka joogtada Ah : in haweeneyda ay ka mashquusho ninkeeda waa arin jaceylka dileysa oo gabaryaheey guriga ama banaankiisaba hakaga maqshquulin , waqti la qaado ninkaada.
3- Hinaasaha Badan : haddii maseerka xadkiisa uu dhaafo waxaa ka dhasha cawaaqib xummo , waxa uuna ka mid yahay bur buriyaha jaceylka.
4- Talooyinka Haweenka Kale : in haweeneyda ay dhageysto dhamaan talooyinka haweenka kale ee saaxibadeeda ah waxa uu ku keenayaa tashwiish iyo rajo beel , gabaryaheey ogoow xariirka adiga iyo ninkaada ayuu u dhaxeeyaa ee sirta gurigaada qari oo la tashiga badan jooji illaa dadka qibradda u saaxibka ah mooyee.
5- Tix Gilin La`aanta : waxaa jira kara in ninkaada leeyahay hami iyo riyooyin u baahan caawin iyo dhiira gilin , balse haddii taasi aadan fahmin waxa uu ninkaada u turjumanayaa in aadan tix gilin u hayn , xittaa hadii uu kaa waayo dhiira gilin waxa uu ka qaadayaa rajo beel waana qaladaadka ugu daran nolosha guurka ee gabaryaheey taxadar ka yeello.
6- Xukun Iyo keli talisnimo: gabdho badan ayaa aaminsan in iyaga ay lahaadaan go`aanada guriga ay ka helayaan laab qaboow balse in ninkeeda ay fahanto isla markaana tix giliso ayaa u soo celin karta qalbi qaboowga.
7- Dacwadda Badan: Haddii ninkaada dareemo dacwad joogto ah isla markaana aad badiso ka hadalka dhibaatooyin xal loo heli karo waxa uu ninka galayaa habka aamusnaanta si nasiino uu u helo , ee gabaryaheey xilliga aad ninkaada kala hadleyso dhibaayooyinka guriga dooro.
dumarka dhadheer qabkee lo wasa
sheeko wasmo malagu kacsadaa